မလေးမြတ်၏ ဝါသနာ: 2013
ဟိုနေ့ ကရေးမယ့် ကမ်းဇော်ဆီ အကြောင်းလေးပါ။ ကမ်းဇော်ဆီက ကမ်းဇောသီးကထုတ်တာတဲ့။ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ် တို့ မြိတ်တို့ ကလာတာ။ ကမ်းဇော်ဆီရဖို့ အတွက် ကမ်းဇော်သီးပင်က အသီးကို ၈နှစ်သက်တမ်းရှိမှ ခူးရတာတဲ့။ မလေးလည်း ကမ်းဇော်ဆီအကြောင်းကို သိပ်မသိဘူး။ မေမေပြောပြသလောက်လေးပဲ သိတာ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ မလေးသီတင်းကျွတ်နေ့ ကချော်လဲတုန်းက ဒူးရော ခါးရော ရဲ ပြီးတော့ကို နာသွားတာ အဲဒီကမ်းဇော်ဆီကိုပဲ ဂွမ်းဆွတ်ပြီး လိမ်းလိုက်တာ နောက်ရက်ကျ ယူပစ်သလိုကို သက်သာသွားတာ။ နောက်ပြီးတော့လည်း မလေးတို့ ဆိုတာ ကွန်ပျုတာသမားတွေဆိုတော့ ဇက်ကျောအရမ်းတက်တယ်။ အခုရက်ပိုင်းဆို မလေးတော့ ညညရောက်ရင် ကမ်းဇော်ဆီလိမ်းဖြစ်တယ်။ မလေးညီမဆိုလည်း မျက်မှန်တပ်ရတဲ့အပြင် ဂုတ်ကျောအရမ်းတက်တာတဲ့။ အဲ့ဒါသူ့ ကို ကမ်းဇော်ဆီလိမ်းကြည့်လို့ ပြောတာ။ ဂုတ်ကျောတ၀ိုက်ကို အလိုပဲ ဂွမ်းနဲ့ ဆွတ်ပြီး လိမ်းတာ သက်သာတယ်တဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေကို ဟိုလူနည်းနည်း ဒီလူ့ နည်းနည်းပေးရင်း နဲ့ မလေးတောင် သိပ်မကျန်တော့ဘူး။ ကမ်းဇော်ဆီ အစစ်က ရောဂါတော်တော်များများ အတွက် ပိုပြီးတော့ထိရောက်တယ်။ သက်လည်းသက်သာတယ်။
ဒီလင့်လေး မှာလည်း ကမ်းဇောဆီ အကြောင်း ရေးထားတာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်နော်
Posted by Unknown at 06:059comments:
မလေးတစ်ယောက်တော့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ က မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ မနက်ပိုင်း အလှူတခုကိုသွားတယ်။ ပြီးတော့ shopping ခဏ၀င်လိုက်သေးတယ်။ အပြန်ကျ wet market ၀င်ပြီးလိုအပ်တာလေး တွေဝယ်တယ်။ ညနေကျရင်သူငယ်ချင်းတွေ ကို ထမင်းစားဖိတ်ထားတော့ ။ အ်ိမ်ကိုသွက်သွက်လေးပြန်လာတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ နားတောင်မနားဘူး။ ချက်စရာရှိတာတွေချက်ပေါ့။ အဲလိုနဲ့ မလေးလည်း ဟင်းတွေအစုံချက်တာ။ အားလုံးကျက်ခါနီးအချိန်မှာ ချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေကိုဓါတ်ပုံရိုက်အုံးမှဆိုပြီး ကင်မရာလေး ကိုင်တုန်းရှိသေး အိမ်ရှေ့မှာ ဘဲလ်တီးသံကြားတာနဲ့သူငယ်ချင်းတွေလာပြီနေမှာဆိုပြီး လက်ထဲကကင်မရာကိုင်ရင်း ပြေးထွက်တာ ချော် လဲပြီး ကင်မရာလည်းပျက်သွားတယ်။ နောက်မှဆိုင်ပြကြည့်တော့ lens ချော်သွားတာတဲ့ ။ပြင်လည်းအသစ်နီးပါးကုန်မှာ ဆိုတော့ မပြင်တော့ဘဲ အသစ်ပဲဝယ်လိုက်တော့တာ။ အဲဒီနေ့ ကဟင်းတွေကို စပယ်ရှယ်ချက်ထားတာ။ မမအိုင်အိုရာ ဟင်းတွေကြည့်ပြီး ရှယ်လုပ်ထားတာ။ ဓါတ်ပုံမရိုက်လိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဘူး။ အဲဒါနဲ့ မလေးချော်လဲသံကြားတော့မှ အိမ်ကလူက အပြေးထွက်လာတာ။ ဒါတောင်သူငယ်ချင်းတွေ ကအော်လို့ သာကြားတာ။ သူဟာသူဆို သိမှာတောင်ဟုတ်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ မလေးအပေါ်ရောက်တော့ မြန်မာဆေးလိမ်းလိုက်တယ်။ မလေး မေမေက လူကြုံရှိလို့ ဆိုပြီး ကမ်းဇော်ဆီတဲ့ပို့ လိုက်တာ။ ကမ်းဇော်ဆီက အကျောနာတာတို့ဒူးနာတာတို အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုပြီးပို့ လိုက်တာ။ တခါမှ အသုံးမပြုရသေးဘူး။ အဲနေ့ ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေလည်းရှိနေ ရုတ်တရက်လည်းဆိုတော့ ဆေးခန်းမသွားဖြစ်ပဲ ကမ်းဇော်ဆီကို ဂွမ်းလေးနဲ့ ဆွတ် ပြီးလိမ်းလိုက်တာ။ မလေးမေမေကပြောတယ် ကမ်းဇော်ဆီက အစစ်ကဈေးကြီးတယ် ။ အရောတရောတွေလည်း ရှိတယ်တဲ့ ။အရောတရော တွေကတော့ ဈေးနဲနဲချို တယ်တဲ့။ ရွှေပြည်ကြီးကတော့ ရောတောရှိဘယ်တော့မှ ကင်းမယ်မသိ။
မလေးကလည်း သူငယ်ချင်းအားလုံးလည်းစုံနေပြီ စားရအောင်ပြင်ပြင်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းအားလုံးက၀ိုင်း လုပ်ပေးတယ် ။ ဟင်းတွေလည်း စားပွဲပေါ်မှာအားလုံးစုံနေပြီ ။ ထမင်းခူးဆိုတော့ ပေါင်းအိုးဖွင့်လိုက်တော့ ထမင်းက မချက်ရသေးဘူး။ ပေါင်းအိုးခလုပ်နှိပ်ဖို့ မေ့နေတာ ။ အဒါနဲ့ ဟင်းတွေပဲရှိပြီး ထမင်းက မချက်ရသေး အားလုံးကိုအရမ်းလည်းအားနာ အချိန်ကလည်းနောက်ကျနေပြီ။ ကိုယ်ကိုယ်ကို သတိမမေ့တတ်ဘူး ထင်နေတာ။ မေ့တတ်လာပြီ။ တော်သေးတာက သူငယ်ချင်းအားလုံးက သိတတ်စွာနဲ့ ခေါက်ဆွဲရှိရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပြီး ဟင်းနဲ့ စားရင်ကောင်းတယ်လို့ ပြောရင်း ချက်ချင်းထပြုတ်ကြတာ။ မလေးကတော့ ခါးရော၊ ဒူးရော နာသွားလို့ သိပ်မလှုပ်နိုင်ဘူး။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်နှင့် ဟင်းများကိုစားရင်း ပျော်ရွှင်စရာသီတင်းကျွတ်ညလေးကို ကုန်ဆုံးသွားပါတော့တယ်ရှင်...............။
မလေးမြတ်ဘလောဂ့်လေးကို လာလည်ကြသော ချစ်သောမိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံး ပျော်ရွှင်စရာ သီတင်းကျွတ်လေးမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်၏ ကျန်းမာခြင်း ကိုယ်၏ချမ်း သာခြင်း နှင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ မလေးတို့ မိသားစုက ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
Posted by Unknown at 01:12 8 comments:
လွမ်း မိလေသော ထိုတစ်နေ့ 
အခုတလော မလေးလေ ငယ်ငယ်က ဘ၀လေးကို ခဏခဏသတိရနေမိတယ်။ ငယ်မူပြန်တယ်ထင်ပါရဲ့ ။ အသက်သိပ်မကြီးသေးပဲနဲ့ တောင် ငယ်ဘ၀ကိုလွမ်းမိသား။ ကိုယ်ဟကိုယ်သာ မကြီးဘူးထင်နေတာ တကယ်ဆို အသက် သုံးဆယ်ကို သေးသေးလေးကျော်လာပြီဆိုတော့ ကြီးနေပါပြီ။ အရင်တုန်းက မလေးမေမေဆိုအမြဲတမ်းပြောတာ မေမေငယ်ငယ်က ဘယ်လို ဖေဖေငယ်ငယ်ကဘယ်လိုဆိုပြီး မလေးတို့ မောင်နှမ တွေကို မမြဲတမ်းပြောပြတာ။ အဲတုန်းကတော့ ငယ်ဘ၀ကို ဘယ်လိုလွမ်းရတယ်ဆိုတာ နားမလည် တတ်သေးဘူး။ အခုကျတော့ မေမေပြောတဲ့ အကြောင်းတွေကို နားလည်လာခဲ့ပြီ။ အဲဒါမေမေကို မလေးကပြောပြတော့ မေမေလေရယ်လိုက်တာ။ မေမေဘာလို့ ရယ်တာလဲမေးတော့ မေမေကပြောတယ် ငါ့သမိးက အခုမှငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာကိုတဲ့။ မေမေဖေဖေတို့ မျက်စိထဲမှာတော့ အခုအချိန်ထိမလေး ကို ငယ်တယ်လို့ မြင်တုန်းပဲ။ မိဘတိုင်းကတော့ ကိုယ်သားသမီးဆို အိမ်ထောင်ကျ သားသမီးရနေတောင်မှ ကလေးလို့ မြင်တုန်းပဲ။
မလေးဆယ်တန်းတုန်းကမှတ်မှတ်ရရ သူငယ်ချင်းလေးယောက် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာ။ စာမေးပွဲကြီးဖြေဖို ကလည်း အရမ်းနီးနေပြီ။ မလေးတို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်က အရှေ့က အကိုတွေအမတွေပြောပြောနေတဲ့စကားလေးကို မှတ်ထားပြီးတော့လိုက်လုပ်ကျတာ။ ဘာတဲ့ ခေါင်းဆေးတာတဲ့ ။ မလေးတို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက် ကလည်း ခေါင်းဆေးမယ်ပေါ့ တိုင်ပင်ကြတာ။ တခါမှလည်းမကြည့်ဖူးဘူး။ သွားကြမယ်ပေါ့ရှပ်ရှင်ရုံကို ။ ဒါနဲ့ မလေးတို့ လေးယောက် ရှပ်ရှင်ရုံကိုသွားကြလေသတည်းပေါ့။ ရုပ်ရှင်ရုံ အပေါက်ကိုရောက်ရော လေးယောက်သမားကြောင်တောင်တောင် ဟိုကြည့် ဒီကြည့် လုပ်နေတုန်း ဗြုန်းဆို အတန်းပိုင်ဆရာမကို တွေ့ ပါလေရော။ မလေးတို့ ငယ်ငယ်ကဆရာ ဆရာမတွေက တပည့်တွေအပေါ်မှာ အရမ်းဂရုစိုက်ကြတယ်။သူငယ်ချင်းလေးယောက်ဆိုတာလေ ဆရာမဆိုပြီး အနောက်ကို လှည့်အပြေး မလေး ဖေဖေနဲ့ တန်းတိုးပါရော။ အဲဒါနဲ့ လေးယောက်စလုံးအိမ်ကို ပြန်လိုက်သွားရတယ်။ ရုပ်ရှင်လည်းကြည့်လိုက် ရဘူး။ မလေးတို့ လေးယောက်စလုံး ကြောက်လိုက်တာ အိမ်ရောက်ရင်တော့ ရိုက်ခံ ဆူခံရတော့မှာပဲ ဆိုပြီး အရမ်းကြောက်နေတာ။
တကယ်တမ်းကတော့ မိဘတွေဆို တာ ကိုယ်သားသမီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ သိပြီးးသား။ မလေးတို့ တိုင်ပင်နေတာကို လည်း ဖေဖေကသိနေတယ်။ မလေးတို့ ကိုအရင် ပေးသွားလိုက်တာ။ ဒီအရွယ်တွေဆိုတာ တားလိုက်ရင် ပိုလုပ်ချင်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ အဲဒါနဲ့မလေးးတို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက် အိမ်ကိုရောက်တော့ ဖေဖေက မေးတယ် မလေးတို့ လေးယောက်ကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်ရင် စာမေးပွဲပြီးရင် ဖေဖေကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ ပေးမယ်။ အခုဟာကစာမေးပွဲက အရမ်းနီးနေပြီ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်မှ သမီးတို့အားလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို အဆုံးထိကြိုးစားရမယ် မတွေဝေရဘူးတဲ့ ။ အဲလောက်လေးပဲ ပြောပြီး မလေးတို့ လေးယောက်ကို သွားသွားစားစရာရှိတာစား ခဏနားပြီးးစာကျက်ကြတဲ့ ။ အလောက်လေးးပဲဖေဖေက ဆုံးမလိုက်တာ။ ကြားထဲမှာပြောဖို့ မေ့နေတာ မလေးက သူငယ်ချင်းးအရမ်းမက်တယ်။ မလေးငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေကိုအရမ်းမင်တယ်။ ၁၀တန်းတုန်းကတော့ တနှစ်လုံး အိမ်မှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို ခေါ်ထားတာ။ မိဘချင်းကလည်းအ ရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူတွေဆိုတော့။ ကျန်တဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ အိမ်နဲ့ မလေးတို့ အိမ်ကူးနေတာ။ မလေးတို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်စလုံးအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်ခဲ့ကြတယ်။ ငယ်ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရဆို တာတွေကို အယောက်စီတိုင်းမှာ ရှိနေကြမယ်ထင်ပါရဲ့ ။ မလေးတစ်ယောက် ငယ်ဘ၀လေးလွမ်းတုန်း ရှိသေးနောက်က သားတော်မောင် ဟစ်ဟော့လေးက မေမေ ရို့ ရို့ ဆိုပြီး လက်လာတို့ လို့လွမ်းမိတဲ့ ငယ်ဘ၀လေးတောင် ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။ စိုင်းစိုင်းသီချင်းထဲကလိုပဲ မျောလွှင့်နေတဲ့တိမ်လို့အော်ဆို ရင်း..................................
သားပိုင်နှင့်ဟစ်ဟော့
အခုတလော မလေးသားပိုင် တယောက်လေ ဟစ်ဟော့ရေစီးကြောင်းထဲမျောပါနေလေရဲ့။ ကလေးတွေများ အတုခိုးမြန်တာနော်။ မလေးက သားပိုင်ကလေး ကြည့်ပါစေဆိုပြီး ဟစ်ဟော့သီချင်းလေးတွေ ဖွင့်ပေးတာပေါ့။ ဟစ်ဟော့အဆိုတော်တွေက သီချင်းဆိုရင် လက်ကလေးတွေ ဟိုဘက်ယိမ်းလိုက် ဒီဘက်ယိမ်းလိုက် ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ လက်နှိုက်လိုက် အစုံပေါ့နော်။ သူတို့ ရဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေက။ မလေးကတော့ အဆိုတော်တွေရဲ့ အမူအရာတွေကို သိပ်သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ အဲလိုလိုက်လုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ လဲမထင်တာ။ မလေးတစ်ယောက်ပိုင်ကို လျော့တွက်တာ။ တရက်ကျတော့ သားတော်မောင်ပိုင်လေ ဘောင်းဘီထဲ လက်နှိုက်ပြီး" ဟေးရို့ ရို့ " ဆိုပြီးလုပ်တာ။ မလေးဆိုတာ မျက်လုံးကိုပြုးလို့ ။ အဲဒါနဲ့ သားကိုမေးရတာ သားအဲဒါဘယ်သူ လုပ်တာမြင်ဘူးလဲမေးတော့ မေမေဖွင့်ပေးတဲ့ တီဗွီထဲကအဆိုတော်တွ လုပ်တာလေတဲ့။ အင်းဖွင့်ပေးတဲ့မလေးအပြစ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းကစပြီး ပိုင်တစ် ယောက်ဘောင်းဘီထဲကို လက်နှိုက်တက်သွားတယ်။ သူများ လက်လှုပ်တာက အပေါ်ယံတင်။ ပိုင်ကျတော့ အတွင်းထဲထိ ကိုင်၊ ကိုင် ပြီး " ရို့ ရို့ " လုပ်နေလို့ မနည်းကို အကျင့်ပြင်နေရတယ်။ ဒီအရွယ်တွေက အတုမြင် အတတ်သင်တယ်လေ။ ကလေးကို တစ်ယောက်ထဲ ထားလို့ မရတော့ဘူး။ ငယ်ငယ်ထဲက စနစ်တကျနဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရတော့မယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ပိုင်တို့ ခေတ်ရောက်လာရင် ဘာတွေထပ်ပြီး တိုးတက်လာအုံးမယ် ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ မလေးတို့ ခေတ်နဲ့ တောင်အရမ်းကွာနေပြီ။ မလေးတို့ ငယ်ငယ်ကဘာဟစ်ဟော့မှ မရှိသေးဘူး။ အခုကျတော့ အရမ်းကြီးခေတ်မှီပြီး ပြောင်းလဲလာတယ်။ မလေးတို့ ငယ်ငယ်က မေမေက ပြောဘူးတယ်။ သားသမီးကို ထိန်းရတာ စောင်းကြိူးလို့ ပဲတဲ့။ လျှော့သင့်တဲ့အချိန်မှာ လျှော့ပြီး ၊ တင်းသင့်တဲ့ အချိန်မှာ တင်းပေးရတယ်တဲ့။
မလေးကိုယ်တိုင်တောင် မိခင်ဖြစ်လာမှ ဒီအကြောင်းတရား တွေကို နားလည်လာတာ။ သြော်မေမေ ပြောတဲ့စကားကမှန် လိုက်တာပေါ့။ သားကိုလည်း သေချာဆုံးမသွန်သင်ရမယ်။ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာမှာ။ သားပိုင်လေးတောင် ၂နှစ်ခွဲ ပြည့်တော့မယ်။ မ်ိဘဆိုတော့လည်း ဒီအရွယ်ပဲ ရှိသေးတာတောင် စိတ်ပူမိသား။
ဒီရက်ပိုင်းဆို ပိုင်က သီချင်းလေး တအေးအေးနဲ့ လေ။ သားဆိုတဲ့သီချင်း က " ရဲတွေလာနေ ရဲတွေလာနေ" တဲ့လေ။ ပြီးတော့လည်း 'ဘာတဲ့လဲလဲ.လဲလဲ..လဲလဲ..လဲလဲ...တဲ့"့အခုခေတ်သီချင်းတွေက ဘာတွေလည်း မသိတော့ဘူး။ မလေးကိုယ်တိုင်ကလည်း ခေတ်မမှီတော့တာနေမှာ။ အင်းခေတ်ကို အညီလိုက်အုံးမှ။ တော်ကြာ သားတော်မောင်က အားလုံးသိနေပြီး ကိုယ်က မသိသေးဆိုလည်း မဖြစ်သေးဘူး။ မလေးကတော့ သားဆိုတဲ့ သီချင်းက ဘာပါလိမ့်ပေါ့။ နောက်မှ မောင်ငယ်ရဲ့ မေးကြည့်တော့ သြော် အဆိုတော်ထွန်းထွန်း (example) ဆိုထားတဲ့ သီချင်းဆိုတာ သိတာ ။ ဟိုလဲလဲ...လဲ သီချင်းကတော့ နစ်ကီဆိုတာတဲ့။ မလေးက ဟစ်ဟော့ သီချင်းတွေကို သားကြည့်ဖို့ သာ ဖွင့်ပေးထားတာ သိပ်နားမထောင်ဖြစ်ဘူး။ သီချင်းဆို အေးအေးလေးတွေပဲ ကြိုက်တာ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ၊ မကြိုက်တာထက် မိဘဆိုတော့ သားကို ဦးစားပေးဖြစ်တာပေါ့။ ကလေးတွေက အဲလို သီချင်းတွေမှ ကြိုက်တာ။ ဟစ်ဟော့ဆို စိုင်းစိုင်းတို့ လောက်သာသိတာ။ အခုနောက်ပိုင်း လူငယ်လေးတွေကျ သိပ်မသိတော့ဘူး။ ဦးငယ်ကတော့ ပိုင်နဲ့ တွဲပြီး အဆင်ကိုပြေလို့ ။ ယောကျာ်းလေးဆိုတော့ ငယ်ငယ်ထဲကဇာတိပြတာလေ။ အခုဆို မိန်းကလေးတွေ မြင်ရင် စတတ်နေပြီလေ။
Posted by Unknown at 08:134comments:
ဒီနေတော့ မလေးတစ်ယောက်တော့ ကျောက်ပျဉ်လေးနဲ့ တော်တော်လေး ကို နှစ်ပါးသွားခဲ့ရ ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံကဒီလိုလေ မလေးတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက် စလုံးကိုအ၀င် Immigration ကစပြီး လွဲခဲ့တာလေ။ ဒီလို မလေးသူငယ်ချင်းက မလေးကို ကျောက်ပျဉ်နဲ့ သနပ်ခါးတုံး လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ။ မလေးအကျင့်က ငယ်ငယ်ထဲက သူများပေးတဲ့ လက်ဆောင်ဆိုရင် အဖိုးတန်တန်၊ မတန်တန် သေချာသိမ်းတတ်တယ်။ သွားလေရာလည်း ယူသွားတတ်တယ်။ မလေးတယောက်စလုံး ပြန်မယ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းလေး ကကျောက်ပျဉ်နဲ့ သနပ်ခါးပေးတော့ ကိုယ်ကစလုံးထိ သယ်လာတာ။ immigration ကိုရောက်ရောပေါ့ အဲမှာ ရှေ့ က မြန်မာကောင်လေးနှစ်ယောက်က အလည်နဲ့ လာတာ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို မေးတာပေါ့ ။ ဒီလိပ်စာက ဘယ်သူ့လိပ်စာလည်း ။ အစုံပေါ့မေးနေတာ။ အဲဒီနှစ်ယောက်က မေးတာကို ကြောင်ပြီးတော့ မဖြေဘူး။ အဲ့မှာတင်မောင်ငယ်က ကြားကနေ ၀င်ဖြေပေးလိုက်တာ။ ၀င်ဖြေပေးတော့ မေးတော့တာပေါ့။ ဘာတော်တာလဲ အဲဒီနှစ်ယောက်နဲ့ က ဆိုတော့ ဘာမှမတော်ဘူး။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ အတူစီးလာလို့ ဝင်ဖြေပေးတာပေါ့ ။ အဲ့မှာတင်ကိုယ်ပါရောပြီး officer ခန်း လိုက်သွားရတာ။ officer ရုံးရောက်တော့ ဘာမှ မတော်ရင်ဝင်မဖြေပါနဲ့ ဆိုပြီး သွားသွားဆိုပြီး မလေးတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်က ထွက်လာရတာ။ မလေးတို့ ကlong term pass ဆိုတော့ ဘာမှပြသနာမရှိဘူး။ ဟိုနှစ်ယောက်တော့ကျန်ရစ်ခဲ့ ရှာတယ်။ တကယ်ကတော့ ကိုယ်ကနိုင်ငံခြားကို သွားဖို့ စိတ်ကူးထားရင် သူတို့ ဘာသာကို အတတ်နိုင်ဆုံးလေ့လာပြီးမှသွားတာ ကောင်းတယ်။ ဒါမလေးအထင်နော်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က အမြင်ချင်းလည်း တူချင်မှတူမှာ။ immigration ဆိုတာသူတို့ မေးချင်တဲ့ လူမေးမှာလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဖက်ကပြည့်စုံနေဖို လိုတာပေါ့။ လူကြီးတွေဆိုရင်တော့ ပြသနာမရှိဘူးပေါ့။ လူငယ်တွေကျမေးတယ်လေ။
အဲဒါတင်ပြီးပြီလာဆိုတော့ မပြီးသေးဘူး။ အိတ်တွေရွေးပေါ့။ အဲ့မှာပြသနာကစတော့တာ။ luggage ကိုဖွင့်ပေးပါတဲ့။ တခုချင်းစီရှာတာ။ သူတို့ ကလည်း မတွေ့ ဘူးပေါ့။ မလေးက သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ ကျောက်ပျဉ်နေမှာ ။ မလေးကလည်း ဒါလားဆိုတော့မှ အိုး ဟုတ်တယ် အဲဒါဘာကြီးတုန်းတဲ့။ အဲတော့ရှင်းပြ ရတော့တာပေါ့။ ဒါကငါတို့ ရဲ့ 
မြန်မာ့ရိုးရာ မိတ်ကပ်ပေါ့ လိမ်းထားရင်လည်း အေးတယ်ပေါ့။ အဖုအပိန့် လည်း သက်သာတယ်ပေါ့။ သူတို့ ကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ စိတ်ကလည်းနည်းနည်း တိုနေပြီ ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့သူတို့ က အဝတ်တွေကို အကုန် ဖွထားတာလေ။ အဲအချိန်မှာပဲမလေးကလည်း ရေပေးပါဆိုပြီး သူတို့ ကိုတောင်းလိုက်တာ။ သူတို့ ကလည်းရေပေးရော ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ ကျကျနန ထိုင်ပြီး ကျောက်ပျဉ် နဲ့ သနပ်ခါးကိုသွေး ၊ ပြီး မောင်ငယ်ကို သူတို့ နှစ်ယောက်ကို လိမ်းပေးလိုက်လို့ ပြောလိုက်တာ။ သူတို့ကလည်းသိပ်စပ်စုတာ စောင့်ကိုနေကြတာ။ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ မောင်ငယ်ကလည်း သူတို့ တစ်မျက်နှာလုံးကို ဖွေးဖွေးဆွတ်လို့ လိမ်းပေးလိုက်တာ။ သူတို့ ကလည်း သဘောတွေကျပြီး very cool very cool နဲ့ ။ သူတို့ ကတော့ သူတို့ ကိစ္စမရှိတော့ဘူး ဆိုတော့ထွက်သွားလို့ ရတယ်လေ။ ကိုယ်တွေကတော့ တခုချင်းကို luggage ထဲပြန်ထည့်နဲ့ ဆိုတော့အချိန်က ကြာသွားတာပေါ့။ လာကြိုနေတဲ့ သားဖေကတော့ ဘာမှမသိပဲ ကြာတာဆိုပြီးတပျစ်တောက်တောက်။ ဟင်းဟင်းစိတ်ရှည်တယ်နော်......။
Labels: အတွေ့ အကြုံ
မလေးတစ်ယောက် အခုတလော သားပိုင်အကြောင်းတောင် မရေးဖြစ်တာကြာပြီ။ မလေးသားပိုင်က အခုဆို ၂ နှစ်ရှိပြီ။ စကားကလည်း လူကြီးတွေ ပြောသလိုကို ပြောတတ်နေပြီ။ အခုတလောဖုန်းလာတယ်ဆိုရင်လည်း ပြေးကိုင်ပြီး (ဘယ်သူရယ် ဘယ်ဝါရာယ်တော့ မသိဘူးပေါ့နော် ) ကလေးဆိုတာသူတို့ တတ်တာလေးကိုပြောချင်တာ။ ဖုန်းကိုင်ပြီးတာနဲ့apple ပန်းသီး ၊ orange လိမ္မော်သီး ၊ goat ဆိတ် အဲလိုလေးတွေပေါ့နော် သူသိတာလေးတွေ ပြောပြီးဖုန်းကို ချလိုက်ရော။ ဟောတခါတလေကျလည်း "ဟလို ဘယ်သူလဲ၊ ဒါပဲနော်" ဆိုပြီး ချလိုက်ရော။ ပိုင်ဘယ်သူလဲဆိုပြီး မေးရင် ဘယ်သူဆက်ဆက် ဦးငယ်လို့ အမြဲပြောတာ။ အဲဒါ ပစ္စည်းမှာတဲ့ လူများလားဆိုပြီး ပေါ်တဲ့နံပါတ် ပြန်ခေါ်ရတော့တာ။ ဟန်းဖုန်းဆိုလည်း သူ့ အိတ်ထဲထည့် ပြီးဖွတ်တယ်လုပ်သေးတာ။ ပြီးတော့ အဖိုးနဲ့ အဘွားကိုလည်း ဖုန်း screeen ကို ဒီလိုလက်ကလေးနဲ့ ထိရတာဆိုပြီး သင်ပေးလေရဲ့။ အဖိုးနဲ့ အဘွားကတော့ ဟုတ်ပ ငါ့ မြေးကမှ သင်ပေးဖော်ရသေးဆိုပြီး တဟားဟားနဲ့သဘောကျလေရဲ့ ။
သားပိုင်ကနဲနဲလည်း ကြီးလာပြီဆိုတော့ လူကလည်လာပြီလေ။ ပိုင်ကပုဇွန်ခြောက် အရမ်းကြိုက်တာ။ မလေးတို့ ကလည်း ကျွေးဖြစ်တာပေါ့နော်။ နောက်မှ မလေးသူငယ်ချင်းက ပုဇွန်ခြောက်အရမ်းမကျွေးနဲ့တုတ်ကောင် ထွက်တတ်တယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ မလေးတို့ ကလည်း ပိုင်မမြင်အောင် ဖွတ်ထားတာပေါ့ ။ မလေးတို့ ကပုဇွန်ခြောက်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲသိမ်းမှန်းသိတယ်လေ။ အဲဒါပိုင်က လူကြီးတွေခေါ်ပြီး ဖွင့်ခိုင်းတာ ။ ပြီးရင်ပုဇွန်ခြောက်ကိုတွေ့ အောင်ရှာတာ ရှာလို့ တွေ့ ရင် တွေ့ ပြီဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရနဲ့ ကျွေးခိုင်း တော့ တာ။ နောက်တော့ သားကိုရှင်းပြရတာ။ ပုဇွန်ခြောက်တွေ စားရင် ကောင်ကောင်ကြီးတွေ ထွက်တတ်တယ်လို့ ပြောတော့ ပိုင်နောက်ဆို စားတော့ဘူးနော်တဲ့။ သားက အလိုပြောတော့ မိဘဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ကစိတ်မကောင်း။
ပိုင်ကယောကျာင်္းလေးဆိုတော့ ကွန်ပျူတာတို့ ၊ ဖုန်းတို့ ၊ တက်ပလက်တို့ သိပ်စိတ်ဝင်စားတာ၊ တီဗီ ဆိုလည်း ကွန်ထရိုးကို အဖွင့်၊အပိတ် channel ပြောင်းတာတွေ ဘယ်တော့မှ မမှားဘူး။ ကွန်ထရိုးကတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ကိုင်လို့ ရတယ်၊ တခြားအရာတွေကို မလေးက မကိုင်စေချင်ဘူး။ ကလေးကငယ်သေးတော့ ပေးမကိုင်စေချင်တာ။ မကိုင်စေချင်ဘူးသာပြောရတာ မလေးကိုယ်တိုင်တောင် တခါတလေဆို သားရေ mouse လေးရွှေ့ လိုက်ပါအုံး ၊ တခါတလေကျတော့လည်း သားရေ enter လေးနှိပ်လိုက်ပါအုံးဆိုလည်း မှန်အောင်နှိပ်တတ်တာ။ အဲ့ တော့လည်း သြော်သားလေးတော်လိုက်တာဆိုပြီး မိဘဖြစ်တဲ့မလေးတို့ က၀မ်းသာရတာပေါ့။ တခါတလေ ဂိမ်းဖွင့်ထားရင်လည်း ပိုင်က mouse ကိုင်ပြီး ကလစ် ကလစ်နဲ့ လျောက်နှိပ်တာ၊ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အရာတွေဆို မကြောက်မရွံ ကိုင်ရဲတော့တာ။ မလေးတူလေးကျတော့ ကွန်ပျုတာဆိုလည်းမထိရဲဘူး။ သားသားသွား ညီလေးပိုင်နဲ့ ဂိမ်းသွားဆော့ချည်ဆိုလည်း ဝေးဝေးကသာ ရပ်ကြည့် နေတာ။ သားတော်မောင်ကတော့ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် mouse နဲ့ လျှောက်နှိပ်ပြီးတော့ ဟီးရိုးကြီး လုပ်ပြနေလေရဲ့ ။
Posted by Unknown at 21:412comments:
ဟိုတနေ့ ကရေးရင်းနဲ့ ရပ်လိုက်ရလို့ ။ ဒီနေ့ မှဆက်ေ၇းရတော့မယ်။ ဒီလိုလေ သားက တင်ပဆုံထဲညှပ်နေတယ်တဲ့ ချက်ချင်းခွဲရမယ်တဲ့။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ စဉ်းစားချိန်တောင် မရလိုက်ဘူး။ ခွဲခန်းထဲရောက်သွားတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်းထဲရောက်တော့ မေ့ဆေးအထူးကုဆရာဝန်က ခါးအလယ်ကို ညှစ်ပြီး ဆေးထိုးလိုက် တာကိုသိလိုက်တယ်။ သတိကတော့မမေ့ဘူး ။ ခွဲနေပြီဆိုတာတော့သိတယ်။ ချက်ချင်းကြီးဆိုတော့ ကြောက်ချိန်တောင် မရလိုက်ရဘူး။ ဘုရားစာတော့ ရွတ်နေတာပေါ့။ ကြားဖြတ်ပြောရအုံးမယ်။ မလေးသူငယ်ချင်းက မလေးအရင်တပတ် စောတယ်မွေးတာ။ အဲဒါသူက ခွဲစိတ်ခန်း ၀င်ခါနီးမှာ ကြောက်တော့ သွေးအရမ်းတိုးလာလို့သွေးပြန်ကျအောင် ၂နာရီလောက်စောင့်လိုက်ရတယ်။
ပုံမှန်ကတော့ ခွဲမွေးတာက ၇ရက် ဆေးရုံမှာနေရတယ်။ မလေးက ကလေးရော လူကြီးရော ကျန်းမာလို့ ၆ရက်နဲ့ ဆင်းရတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ၇ရက် တက်ခိုင်းတာက ပထမတရက်က medical check up လုပ်ရတာ။ မလေးကချက်ချင်းခွဲတာမို့ check up မလုပ်လိုက်ရတာ check up ဖိုး ၄၃၀၀၀ သက်သာသွားတာပေါ့။ နာရီဝက်လောက်နေတော့ သားသား ငိုသံကြားရရော။ သြော် သားလေးမွေးပြီဆိုတာ သိလိုက်တော့ တအားကို ပျော်သွားတာ။ အဲအချိန်မှာအိုဂျီက သမီး သားလေးက ကိုယ်လက်အင်္ဂါလည်းစုံတယ် အရမ်းလည်း ချစ်စရာကောင်းတယ် လို့ ပြော ရင်း မလေးရင်ဘတ်ပေါ် ခဏလာတင်ပေးတယ်။ ပြန်ချုပ်တာနဲ့ဘာနဲ့ ဆိုတော့ စုစုပေါင်း အချိန် ၁နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်။
ခွဲခန်းထဲက ထွက်လာပြီး တော့ မလေးကအိပ်ပျော်သွားတာ။ ဘာမှလည်းမနာဘူး။ nurse ကလည်းပြောပါတယ်။ မနာတဲ့ဆေးထည့်ပေးလိုက်တာတဲ့။ ခဏနေတော့ အိုဂျီရောက်လာပြီးတော့ သမီးစားချင်တာ အစုံစားနော်တဲ့။ သမီးများများစားမှ ကလေးကအားရှိမှာတဲ့။ ကြားဖြတ်ပြောဖို့ မေ့နေတာ။ အိပ်ရာကနိုးလာတော့ nurse က အစ်မ juice သောက်မလား ၊ ရေသောက်မလား ကော်ဖီ သောက်မလားတဲ့။ အဲဒါနဲ့ မလေးကလည်းရေပဲသောက်ချင်တယ်လို့ ပြောတော့ ရေတိုက်ပေးတယ်။ ၂နာရီတခါ pressure လာတိုင်းတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ကလေးမွေးပြီးပြီးခြင်း ဟင်းချိုပူပူလေးသောက်တာကောင်းတယ်။ မလေးတစ်ယောက်သားကိုမွေးပြီး စားကောင်းလိုက်ပုံများ ချိုင့်ကြီး ချိုင့်ငယ်နဲ့ ကို အိမ်ကမနားတမ်းပို့ နေရတာ။
ခွဲမွေးတာဆိုတော့ ၀မ်းမချုပ်အောင်လည်း ဂရုစိုက်ရတယ်။ လူကြီးတွေကတော့ ခေါင်းမလျှော်ရဘူး။ ဘာမှ မလုပ်ရဘူး အစုံပေါ့နော်။ မလေးကတော့ ၁၅ရက်နေတော့ ခေါင်းလျှော်တယ်။ ရေကတော့နေ့ တိုင်းချိုးဖြစ်တယ်။ သားသားကိုတော့ nurse က တရက်ခြားရေချိုးပေးတယ်။ မိဘဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ အစစအရာရာတော့ ဂရုစိုက်ရတော့တာပေါ့နော်။ မလေးရဲ့ nurse ကပြောပြတာက ကလေးတစ်ယောက်က မွေးပြီး၁လကျော်လောက်ထိကို နို့ စို့ လိုက် အိပ်လိုက်လုပ်နေမှ ကျန်းမာပြီး ညဏ်ရည်ဖွံဖြိုးတာ တဲ့။
Posted by Unknown at 21:284comments:
Posted by Unknown at 05:222comments:
ဒီပိုစ့်လေးရေးဖို့ ဖန်လာတာကတော့ သားတော်မောင်ပိုင်က ဒူးရင်းသီးလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ မကြိုက်ဘူးဆိုတာက မလေးအထင်သားက ဒူးရင်းသီးအနံ့ ကို မကြိုက်တာထင်တယ်။ ဒီလို မလေးတို့ က သားကို ဒူးရင်းသီးအနံ့ ပါတဲ့ ဘီစကစ်လေးတွေ ဆိတ်နို့နဲ့ လုပ်တဲ့ဘီစကစ်လေးတွေဝယ်ကျွေးတာပေါ့နော်။ ဘယ်လိုကြောင့်ရယ်မသိဘူး။ အဲဒီဒူးရင်းသီးနံ့ ပါတဲ့ ဘီစကစ်ကို လုံးဝမစားဘူး။ အဲဒါနဲ့ မလေးတို့ က ဒူးရင်းသီးပါတဲ့ မုန့် ရယ် တခြားမုန့် တွေရယ် ရောပြီး သားကိုပေးတာ ။ဘယ်လောက်ပဲရောထား ရောထား တခြားမုန့် တွေသာယူတာ အဲဒီဒူးရင်းသီးမုန့် ဆို လွှင့် ကိုပစ်တာ။ အဲဒါအိမ်က အဖိုးတွေ အဘွားတွေက အတင်းသဘောကျကြတာ။ (မင်းတို့ ငါမြေးမြန်း ဘာထင်နေလို့ လဲ မင်းတို့ တောင်ရောင်းစားသွားအုန်းမယ်တဲ့ ) လူကြီးတွေဆိုတော့ သူတို့ မြေးလည်တာကို အတင်းသဘောကျတာလေ)။ အဲဒါပိုင်ဘွားဘွားရဲ့ မိတ်ဆွေအိမ်ကို လာလည်တော့ ပိုင်ရေဒူးရင်းသီးစားမလားလို့ မေးတာကို သားပိုင်တစ်ယောက် စားဘူး စားဘူးဆိုပြိး ပြေးလေရဲ့ ။ကလေးတွေက ဘယ်လိုလုပ်သိလဲမသိဘူးနော်။ သူတို့ မကြိုက်တာကို။ ပိုင်ကတော်ရုံ ဆို အစားမရွေးဘူးရယ် အစုံစားတာ။ သားပိုင်ရဲ့ ဦးငယ်ဆို သားပိုင်ကို အစုံစားလေးရေ ဆိုပြိးချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တာ။ ပိုင်ဦးငယ်က အံ့သြနေတာ။ အစုံစားလေးက ဒူးရင်းသီး မုန့် တော့မစားပါလားကွ ဆိုပြိး ရယ်လေရဲ့ ။ပိုင်ကအိမ်ရဲ့ ဗိုလ်လေ။ပိုင်ဦးငယ်ဆိုတူလေးကိုချစ်လိုက်တာမှတုန်လို့ ။
မိဘတွေဆိုတာတော့ပြောမပြတတ်အောင်ပေါ့။ မလေးတို.က သားကို ငယ်ငယ်ထဲက အတတ်နိုင်ဆုံး ဆီမပါတာကို ကျွေးဖြစ်တယ်။
မလေးတို့ မိသားစုက များသောအားဖြင့်ဆီလည်းလျော့စားဖြစ်တယ်။ soup ကို ပိုင်ကအရမ်းကြိုက်တယ်။ များသောအားဖြင့်ဟင်းနုနွယ်ရွက် ရယ် ငါးအသားလုံးလေးတွေရယ် ကို အမြဲလိုလိုကျွေးဖြစ်တယ်။ ဆီလည်းလုံးဝ မပါတော့ ကလေးအတွက် side effect မဖြစ်တာပေါ့။ တခါတလေလည်း ဂေါ်ဖီကို နူးနေအောင်ပြုတ် ပြီးရင်ကြက်သားလေးကို ထည့်ပြီးပြုတ် ကျွေးတယ် ။ ဂေါ်ဖီရဲ့ အရသာက မူလကိုက ချိုတယ်။ တခါလေလည်း noddle soup လေး လုပ်ကျွေးတယ် (အရွက်တမျိုးမျိုးတော့ပါအောင်ထည့်တယ်)။ ကန်စွန်းရွက်ကိုလည်းငါးဖယ်လေးတွေ ကြက်သားလေးနဲ့ ရောပြီးလည်း soupလေးလုပ်ပြီးကျွေးတယ်။ အချိုကတော့ သိပ်မကျွေးဘူး သွားပိုးစားမှာဆိုးလို့ လေ။ မလေးကိုယ်တိုင်လည်း သားကို ကိုယ်ဝန်ရှိတည်း က ဆီပါတာဆို ရင် မစားချင်တာ့ဘူး။ သားကို ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီး တစ်မိသားစုလုံးဆီလျော့ စားဖြစ်တော့တာပေါ့နော်။
နောက်တခု ကရယ်စရာလေးရယ် သားကငယ်ငယ်တုန်းက ကြောင်ဆိုသိပ်ကြောက်တာ။ (ဗန္ဓုလသွေးလေ) ခွေးတော့ မကြောက်ဘူး။ အခုတော့ နည်းနည်းကြီးလာတော့ ကြောင်ကို လုံးဝ မကြောက်တော့ဘူး။ ယောင်္ကျားလေး ဗီဇ အတိုင်း ကြောင်တို့ ခွေးတို့ မြင်ရင် တုတ်နဲ့ လိုက်ရိုက်ချင်တော့တာ။ တစ်ရက်ကျတော့ ပိုက်က ဂေါက်ရိုက်တံ နဲ့ ဆော့ နေတဲ့ အချိန် ကြောင်ကလည်း သူ့ မျက်စိရှေ့ ရောက်လာတဲ့ အချိန် ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ ကြောင်ကို လက်ထဲရှိတဲ့ ဂေါက်တံနဲ့ လှမ်းထို့ တာပေါ့။ မလေးအထင် သားကကြောင်တို့ ၊ ခွေးတို့ ဆို အညည်းယားပြီး လိုက်တို့ ချင်တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကြောင်ကလည်း သူ့ ရိုက်တော့မယ် ဆိုတာသိတော့ ပိုင်ရှိတဲ့ဘက်ကို အပြေး ပိုက်ကလည်း ဒီဘက်အလှည့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆုံတော့ ကြောက်ပြီး ငိုပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ မလေးတို့ က သားကို ပြောပြရတယ်။ ဘယ်ဟာဆိုရင် ဘယ်လို ကောင်းတယ် ၊ ဘယ်ဟာကို ကိုင်ရင် ဘယ်လို ဖြစ်တက်တယ်ဆိုတာ အခြေအနေ အချိန်အခါပေါ် မူတည်ပြီး ကလေး နားလည်လောက်မဲ့ အနေအထားလေး နဲ့ ရှင်းပြရတယ်လေ။
Posted by Unknown at 20:393comments:
ဘွတ်ဘွတ်လေးနှင့်နှစ်ပါးသွားလေးကခဲ့ရ
မိုးရာသီ ရဲ့ တနေ့ မှာ ပေါ့။ မလေးတို့ သားအမိသုံးယောက် shopping သွားကြတာ ။ အဲဒီ shopping ကတော့ မလေးတို့ အတွက် အမှတ်တရ ပါ (နောင် သားကြီးလာရင် အဒီအကြောင်းလေး ပြောပြရမယ်) ဖြစ်ပုံက ဒီလို အဲဒီနေ့ က ဂမုန်းပွင့် ကုန်တိုက် မှာ ပရိုမိုးရှင်း လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ သွားကြတာပေါ့။ သားအမိတွေ အပေါ်တက်လိုက် အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့လိုတာလေးတွေ ၀ယ်နေတာ ပေါ့ ။ အဲဒီအချိန်မှာ သားဖေက ကလေးကို dyapers ၀တ်ပေးထားတာ လေး ၊ ငါးနာရီ ရှိနေပြီတဲ့။ အသစ်လဲ ပေးလိုက်နော်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ မလေးကလည်း ဟုတ်ပါတယ် သားကိုအသစ် လဲပေးအုံးမယ် ဆိုပြိးကိုယ်က အချွတ် ပိုင်က ဘွတ်ဘွတ် ဘွတ်ဘွတ်ဆို ပြီး ပါချ လိုက်ပါလေရော။ အဲဒါနဲ့floor တွေမှာ ဘွတ်ဘွတ်တွေ ပေကုန်တော့တာပေါ့ ။ security လေးတွေက ပြေးလာပြီး tissuse တွေလာပေးကြတာ။ အဲဒါနဲ့မလေးကလည်း security လေးတွေကို အားနာလိုက်တာ မလေး ပြန်လုပ်ပေးမယ် ပြောရတာပေါ့ ။ security လေးတွေက ဘာပြန်ပြောလည်းဆိုတော့ 'အစ်မဒီဟာက ကျွန်တော်တို့ ပြန်လုပ်လို့ ရတယ် ၊ အစ်မ စကပ် ကြည့် လိုက်အုံးတဲ့ ' သူတို့ ပြောမှ ပဲ ကိုယ်စကတ်ကို ပြန်ကြည့် မိတယ်။
ဟယ် ဟုတ်ပရဲ့ စကပ်မှာ လည်းဘွတ်ဘွတ်တွေ ပွလို့ ပါလား (ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့ က စကပ်ကလည်း ဒူးမရှိတရှိလေး ၀တ်မိရဲ့လှချင်ရဲ့စက်စက်ယိုလေ) အဲဒါနဲ့ သူတို့ တွေက စကပ်မှာပေနေတဲ့ ဘွတ်ဘွတ်တွေကို tissue နဲ့သုပ်လိုက်ပါလားတဲ့ ။ ဒီဖက် မှာ သားအမိနှစ်ယောက် ရှုတ်ယှက် ခတ်နေတာကို သားပိုင်ဖေ မမြင်ဘူးလေ။ sale girls ချောချောလေးတွေကို မမြင်ဘူးတဲ့သူကျလို့ငေးနေတာ မလေးအော်ခေါ်မှ ပဲ ကြားပြီး ပြေးလာတော့တာ။မလေးကစကပ်ကိုလည်း tissue နဲ့ သုတ်ရင်း ကလေးလဲ အကျီ်လဲ ဆိုတော့ (၀တ်ထားတာကစကတ်အတို ပေါင်တွေဒူးတွေလည်းပေါ်လို့ ) အဲ့ကျမှ ကလေးကိုခေါ်ပြီး လဲစရာရှိတာ လဲပြီး ပြန်ကြတော့တာ။
ချစ်သောသားလေးးပိုင် ၈လအရွယ် အမှတ်တရ
မလေးကသားကို ထိုင်တတ်တဲ့ အရွယ်ကစပြီး ဘွတ်ဘွတ်ကို potty လေးနဲ့ ပဲ သွားတတ်အောင် အကျင့်လုပ်ပေးခဲ့တာ။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ငယ်ငယ်ထဲက စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင် ပြီး သေချာသင်ပေးခဲ့ရင် ကြီးလာတဲ့အခါ အရာရာ ကို စနစ်တကျ နဲ့ နေတတ်တယ်။ တခြားကလေးတွေ ကိုတော့မလေးမသိဘူးနော် ။ မလေးတို့ မိသားစုရဲ့ သားကိုပြုစုပုံနော်။ ကိုယ်ကမိဘဆိုတော့ သားပိုင် ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ချင်တယ် ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ သားမျက်နှာကို ကြည့် ရင်သိတယ်။ သားပိုင်ကလည်း အဲဒီအချိန်က စကားမပြောတတ်သေးပေမဲ့ အမူအရာ နဲ့ ပြတတ်တယ်။ ခါတိုင်းနေ့ တွေက ဘွတ်ဘွတ်ဆိုရင် ပြောတယ်ရယ်။ အဲဒီ နေ့ က (shopping) ကတော့မှတ်မှတ်ရရပဲ။ တကယ်ဆိုရင် သားကမအေမျက်နှာကို ကြည့်ပြီး အမူအရာနဲ့ ပြရင်ပြမှာ ရယ်။ မလေးကိုယ်တိုင်ကလည်း cosmatic ဖက်ကိုငေးနေတာ ။ သားပိုင်ဖေကို ပြောလို့ သာပြောရတာ တကယ်တမ်းကတော့ မလေးကလည်းငေးတတ်တယ်။
မလေးသိတာ ကလေးတွေက အရာရာကို စူးစမ်းချင်တာ သိချင်တာ။ မလေးတို့ ကတော့ သားသိချင် ကိုင်ချင်တာတွေဆို ရင် လိုချင်တာတွေဆိုရင် သူသိချင်တာပေါ်မူတည်ပြီး ပြောပြတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ သိချင်စူးစမ်းချင်တဲ့ စိတ်ကိုမပိတ်ပင်ရဘူး။ ကလေးတွေမှာလည်းသူတို့ အသိညဏ်နဲ့ သူတို့ ရှိတယ်။
Posted by Unknown at 05:406comments:
Labels: မြန်မာ ပြည် ရောက်ခိုက် ရာဇ၀င်
သီအိုရီ လေးနှင့်ကျွန်တော်
မလေး တစ် ယောက် ဒီအကြောင်းလေး ကို ရေးမယ်ဆို ပြီး စိတ်ထဲက သာရေးဖြစ်နေတာ။ ဒီနေ့ တော့လက် တွေ့ ချရေးဖြစ်ပါပြီ ။ ဒီလိုပါ မလေးကလေ သားကို မွေးပြီး တော့ တအားကို ပိန်သွားတာ ။ လည်ပင်းလေးဆိုတာ ကြက်လည်ချောင်း ရိုးလေးကျလို့ ။သားပိုင် ကိုမွေးတုန်းက ၆ပေါင် ၁၀အောင်စပဲရှိတာ.။သားတော်မောင်က မွေးထဲက အစားသန် တာ ။ (နို့ စို့ သန်တာ) တလပြည့် တော့ ပေါင်ချိန်ကြည့် တော့ ၁၀ ပေါင်နဲ့ ၃အောင်စ ။ မလေးဘယ်လောက်စားစား မလေးက ၀မလာဘူး ။ သားပိုင်လေး ၀လာတယ် ဆိုပြီး ကျေနပ်ရတော့ တာ။ (မလေးဘယ်လောက်ပိန် ပိန် သားပိုင်လေးဝပါတယ်လေဆိုပြီး ကိုယ်ဟာကိုယ်အားပေးရတာ .သားဖေကတော့မလေးကို အားပေးရှာ ပါတယ် ပိန်မှမော်ဒယ်နဲ့ တူတာတဲ့) မလေးက သားပိုင်ကို ၁နှစ် နဲ့ ၅လမှာ နို့ ဖြက်လိုက်တာ.။ သားကိုနို့ ဖြက် ပြီးမှ မလေးလည်း ၀လာတော့တာ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တော့ မတူဘူးပေါ့ နော် ။တချို့ ကြတော့လည်း ကလေး မွေးပြီး ၀လာကြတယ် ။ တချို့ လည်းပိန်သွားကြတယ်တဲ့ ....
မလေးကနို့ တိုက်မိခင်ဆိုတော့အစားဆို အကုန်စားတာ.။ဘာမှမရှောင်ဘူး။ ကိုယ်ကအစုံစားမှ ကလေးဆီကို ဗီတာမင်အစုံရောက်မှာ... အဲဒါမှ ညဏ်ရည်ဖွံဖြိုးပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတာ.. မလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို (သူ့ ရဲ့ မိဘတွေက ကလေးမွေးပြီးတော့ အစုံမစားခိုင်းဘူး. ကန်စွန်းရွက် ကြော်စားမယ် ဆိုလည်း ကလေးလေနာမယ် မစားနဲ့ ဥနီဆိုလည်းမစားနဲ့ကလေးဝမ်းလျောလိမ့်မယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ မလေးသူငယ်ချင်း ဟိုဟာမစားရ ဒီဟာမစားရဖြစ်ရော) နောက်တော့ မလေးသူငယ်ချင်းကလေး ကကြိးလာတော့ ချူချာတော့ တာ ။ မိခင်ဆီက ဗီတာမင်စုံအောင် မရခဲ့ လို .လေ..ကလေးကိုပြုစုပုံချင်းကတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ဘယ်တူမလဲနော်.. ဒါပေမယ့် အခြေခံကတော့ အတူတူပဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ညဏ်ရည်မြင့် ဖို့ ဆိုတာ အာဟာရ ဓါတ်ပြည့် စုံဖို့ လိုတယ် ။
မိခင်ဖခင်ရယ် ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ကိုယ့် သားသမီးကို အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်စေချင်တာ မိဘတိုင်းရဲ့ အနှိုင်းမယ့် မေတ္တာတွေပါ.။ ရေးရင်းနဲ့ ဘယ်ရောက်သွားပါ လိမ့် ။ အခုနကပြောတဲ့ မလေးသူငယ်ချင်းရဲ့ သားလေးဆို ခဏ ခဏနေမကောင်းဖြစ်တာ။ တော်ကြာအစားမှားသွားလို့ ဆေးခန်းပြေးလိုက်ရ တော်ကြာ အပြင်သွားတုန်း လေစိမ်းတိုက်လာပြီး ၀မ်းလျောလို့ ဆို ပြီး ဆေးခန်းပြေးလိုက်ရနဲ့ ။ ပြင်ပရဲ့ ဒဏ်ကို ကလေးက မခံနိုင်တာလေ။ ပြီးတော့ ကလေးကို အစားစုံအောင် မကျွေးတာလည်း ပါတယ်။ ရှေးတုန်းက ဆိုရင် ဆီ ၊ ဆား ၊ ကြက်ကြော်လေးနဲ့ ပဲ စားခိုင်းတာ။ ဘယ်အဟာရ ရှိပ့မလဲ ။ မလေးတုန်းကတော့ စားတာမှ တစ်ခုမှကို မရှောင်ဘူး ။ ကွေကာအုပ်ဆိုလည်း မတ်ခွက်နဲ့ ၃ လေး ၄ ခွက်တော့ အသာလေးပဲ ရယ်။
ကလေးဝမ်းသွားနေပြီဆို ရင် ဆန်ပြုတ်ကျွေးတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ကလေးရဲ့ အရွယ်ကိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ ။ ကလေးရဲ့ အသက်အရွယ်ပေါမူတည်ပြီး ဆန်ပြုတ်ကို အနည်းနဲ့အများ ချင့် ချိန်ပြီး ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ဟောလစ်တို့အိုဗာတင်း တို့မိုင်လိုတို ကို တိုက်တဲ့ အရွယ်မှာ ၀မ်းသွားခဲ့တယ်ဆိုရင် အဒီအချိန်မှာ အိုဗာတင်းတို့ တိုက်တာကိုရပ်ပြီး ဆန်ပြုတ်ကျွေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
Posted by Unknown at 06:322comments:
ကိုက်ခြင်း ၏ အနုပညာ
ဒီနေ့ တော့မလေး တစ်ယောက် ကိုက်တဲ့အကြောင်း ရေးပါမယ်။ ဒီလိုပါ ကလေးတွေ ကသွား ပေါက်ခါနီးရင် တွေ့ သမျှအရာ တွေကို ကိုက်ချင်ကြတယ်။ မလေးသားပိုင် ဆို မလေးကို အရမ်းကိုက်တာ။ ကိုက်ပေမဲ့လည်း သည်းခံရတယ်နော်။ (ကိုယ့်သားဆိုတော့ချစ်ကလည်း အရမ်းချစ်) မလေးထင်တာ မိဘတိုင်း ကသူတို့ ရဲ့ သားသမီးတွေကို အကောင်းဆုံး ပေးဆပ်ကြတယ်။ အမှန်ကတော့ ကလေးတွေက သွားပေါက် ခါနီးရင် သွားဖုံးတွေ ကယားလာတာ။ သွားဖုံးယားတော့ တွေ့ ရာ မြင်ရာကို ကိုက်တာ။ နို့ တိုက်ရင်လည်း ကိုက်ထားတာ။ အဲလို အချိန်ဆို နှာခေါင်းကို ပိတ်လိုက်မှ လွှတ်တာရယ်။ ကစားစရာ လေးတွေဆို သွားပေါက်ခါနီး အချိန်တုန်း က ပျော့ပျော့ အရုပ် ကလေးတွေပဲ ၀ယ် ပေးတာ။ မလေးကတော့ သားပိုင် ကို သွားပေါက်တုန်းက နွားနို့ များများ တိုက်ဖြစ်တယ်။ သားပိုင်က တွေ့ ရာကို ကိုက်လို့ မလေး ကပျော့တဲ့ အရုပ် ကလေးတွေပေး သားကတော့သူကိုင်ချင်တာမှ ကိုင်တာ ။မလေးပေးတာလည်း ကိုင်ချင်မှကိုင်တာ။ သားအမိနှစ်ယောက်တော့ဟုတ်လို့ ။
သားပိုင်တို့ များငယ်ငယ်ထဲက သူကြိုက်တာမှ ။ဘယ်အရာမှ အတင်းလုပ်လို့ မရ။ သားပိုင်က ငယ်ငယ်ထဲက အရုပ်ဆက်တာလေး တွေမှ ကြိုက်တာ။ အရုပ်ဆက်တာ လေးတွေပဲ အဆော့များတာ။ သားပိုင်ဖေကတော့ သူ့ သားကြိုတ်တာတွေ ပဲ (အရုပ်ဆက်တာလေးတွေ) အမျိုးစုံ ၀ယ်လေသတည်းပေါ့။ အရုပ်ဆက်တာလေးတွေ ဆော့တာ မလေးကတော့ သဘောကျတယ်။ (အဲဒါ ဆော့နေရင် ငြိမ့်လို့ လေ ) မဟုတ်လို့ ကတော့ တစ်အိမ်လုံးကို ပတ်ချာလည်ပြီး ပြေးနေတော့တာ။ နောက်ကနေ မောနေအောင် လိုက်ရတာ။
သားပိုင်ကြိုက်တဲ့အရုပ်ကလေးတွေ
တနေ့ တနေ့ ပိုင်ကမရိုးအောင်ကို ဆော့ တာ။ ကစားစရာတွေကို တစုတစည်းထဲ ဖြစ်အောင် ပလတ်စတစ်ခြင်းထဲ ဘည့် ထားတာ ။ အဲဒီပလတ်စတစ် ခြင်းကို တရွတ်တိုက်ကြီးဆွဲပြီး ခြင်းထဲက ကစားစရာတွေကို သွန်ချပါရော ။ သွန်ချပြိးရင် အဒါတွေ မကိုင်တော့ ဘူး။ တခြားဟာတွေဆော့ရော။ ပိုင်မဆော့တော့ပါဘူးလေဆိုပြီး ခြင်းထဲက အရုပ်တွေ တခုခြင်း ပြန်သိမ်း သိမ်းလို့ မှ ၅မိနစ်မရှိသေးဘူး။ အဲဒီအရုပ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ခြင်းကြီး ကို ပြန်သွန်ပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ မလေးကသိမ်းလိုက် သားက သွန်လိုက် နဲ့ ။ နောက်တော့ သားကစားစရာတွေ အားလုံးကို သားအိပ်မှပဲ သိမ်းတော့တယ်။ သားပိုင်က ငယ်ငယ်ထဲက အမှတ်သညာ ကောင်းတယ်။ ဆက်တဲ့ အရုပ်ကလေးတွေ ထဲက အပေါ်က အရုပ်အနီကလေး ကပျောက်နေတာ။ အဲဒါ ပိုင်က ဟိုခြင်းမွှေလိုက် ၊ ဒီခြင်းမွှေလိုက် ၊ ဗီဒို ဖွင့်မွှေလိုက် လုပ်နေတာ ။ မလေးကလည်းအမှု့ မဲ့အမှတ်မဲ့ပေါ့။ ပိုင် ဘာရှာနေမှန်း မသိဘူး။ အမှန်က ပိုင်က အရုပ် အနီလေးကိုရှာတာ ။ မလေးက သားဒါလား ဒါလားလို့ မေးရင် ခေါင်းရမ်းတာ။ သူလိုချင်တာ ဘာပါလိမ့်ဆို ပြီးအားလုံး ၀ိုင်းရှာရတာ။ နောက်တော့မှ ဗီဒိုထဲက အရုပ်အနီလေးတွေ့ လို့ သားဒါလေးလားလို့ မေးမှ ခေါင်းငြိမ့် ပြတော့တာ။ မဟုတ်ရင်တစ်အိမ်လုံး တစ်ယောက်မှ ငြိမ်ငြိမ်မနေရဘူး ၀ိုင်းရှာရတာ ။သားပိုင် ခေါင်းငြိမ့် မှ ပဲ တစ်အိမ်လုံး ဟင်းဆိုပြီး သက်ပြင်းချနိုင် တော့ တယ် ။
ပိုင်က angry bird သိပ်ကြိုက်တာ။ ဖိနပ် အကျီ င်္ဘောင်းဘီ ဦးထုပ်ကအစ အကုန် လုံး angry bird ပါတာတွေ ရွေးဝယ်ပေးရတာ။ ပိုင်က အမှတ်သညာကောင်းတော့တခါပြောသံကြားရင် မှတ်မိတယ်။ တရက်ကမလေးနဲ့မလေးသူငယ်ချင်း ရဲ့ သားနဲ့ ( ပိုင်ထက် ၁ နှစ်လောက်ကြီးတယ်) shopping center သွားကြတာ အဲဒါမလေးသူငယ်ချင်းရဲ့ သားက သူ့ မေမေကို မေမေ angry bird ၀ယ်ပေးလို့ ပြောတာကို ပိုင်ကမှတ် လာတာ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကစပြီး သားပိုင်ကလည်း မေမေဘတ်ဘတ် လို့ ပြောတော့တာ။ မလေးနဲ့ ပိုင်ဖေကတော့ သားရဲ့မှတ်ညဏ် ကောင်းတာကို ကြည့် ပြီး ပျော်ရွှင် ကြည်နူးနေတော့တာ။
သည်းသည်းတုန်၏ လျှို့ ဝှက်ချက်
မလေးတစ်ယောက် ဒီပိုစ့်လေး ကို ရေးမယ်ဆို ပြီး မရေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ ဒီနေ့ တော့ ရေးဖြစ် ပါပြီ။ လျှို.၀ှက်ချက် နော် ။ ဒီလို.ပါ မလေးက သားကို ၆လ ပြည်. ပြီး ထမင်း စကျွေးတဲ့ အချိန်မှာ ကြုံရတဲ့ အတွေ့ အကြုံ လေးပါ။ မလေးသားက အဟာရမှုန့် ကို လုံးဝမစားဘူး။ အဒါနဲ့တခုပြီး တခုပြောင်းကျွေးကြည့်ရတာ။ ထမင်းမှပဲ စားတော့တာ။ ထမင်းစကျွေးတော့လည်း အာဟာရဖြစ်မယ့် အစာတွေကို နဲနဲချင်းဆီ ထည့်ကျွေးရတာ။ ဥပမာ ဒီနေ့ ပဲရာဇာ (ပဲနီလေးလို့လည်းခေါ်သည်) ကျွေးမယ်ဆို ထမင်းချက်တဲ့အခါ ပဲရာဇာ ကိုပါ တခါတည်း ထည့်ချက်လိုက်တာ။ မလေးကတော့ ကလေးအတွက် သီးသန့်ပေါင်းအိုး အသေးလေးတစ်လုံး ထားလိုက်တာ။
နောက်ပြီးတော့ ခါကျက်ဥ ကိုလည်း ရေကိုစင်အောင်ဆေးပြီး ခြစ်နဲ့ ခြစ်ပြီး ထမင်းထဲထည့်ချက်တာ။ တခုတော့ရှိတာ ပေါ့နော် ထမင်းကျွေးတော့မ.ယ် ဆိုရင် တော့ ထမင်းချေတဲ့ ready made ပစ္စည်းလေးတွေ နဲ့မလေးကချေပြီးမှ ပဲကျွေးတာ။ အသီးအနှံတွေလည်း ဖြည်းဖြည်းခြင်း အမည်စုံ ကျွေးကြည့်တာ။ ယောကျာင်္းလေးဆိုတော့ ငယ်ငယ်ထဲက အစားမရွေးအောင် အကုန်ကျွေးကြည့်တာ။ ပြီးတော့ ငါးစားရင်လည်း ညဏ်ရည်ဖွံဖြိုးတယ်ဆိုတာနဲ့ ငါးကိုလည်း ကြော် ကျွေးတာ သားသားက အရမ်းကြိုက်ပဲ။
ပြီးတော့လည်း ကလေးမွေးပြီးပြီးခြင်းလည်း လက်သည်းညှပ်မပေးရဘူး။ ကလေး တစ်လ နေမှ မလေးက တော့ ညှပ်တာ။ ညှပ်လိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ လက်ညည်းတွေက ကြမ်းကုန်တယ် ဆိုတာနဲ့ တစ်လ ပြည့်တဲ့ အထိ လက်အိပ်လေး နဲ့ စွပ်ပေးထားတာ။ လက်သည်းနဲ့ ပြန်မခိုက်မိအောင်လို့ လေ။ ပြီးတော့ ကလေး အဝတ်အစား ကြားထဲမှာ ပရုတ်လုံး လုံးဝ မထည့်ရဘူး။ ပြီးတော့ ကလေး နှစ်လလောက်ထိ မလေးကတော့ အမွှေးအကြိုင် လုံးဝ မသုံးဖြစ်ဘူး။ အခန့် မသင့်ရင် ကလေး ရင်ကြတ် တက်လို့ ။ မွေးပြီးပြီးခြင်းလည်း ကင်းပွန်းချည်ရွက် မစားရဘူးလို့ ပြောတာ နဲ့ မလေးလည်း မစားဖြစ်ဘူး။ မလေးကတော. သားကို အစုံကျွေးတာ။ ဘာမှ မရွေးဘူး။ သားကျန်းမာတာ မြင်ရတော့ မိဘတွေမှာ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာကြည်နူးရတာပေါ့နော်။
ဂတ်ဂတ် အရှုပ် တော်ပုံ
သားပိုင် နှင်. ဂတ်ဂတ် ကြီး အကြောင်းပါ။ ဒီလို ပါ မလေး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ကသားပိုင် ကို ဘဲရုပ်ကြီးတစ်ရုပ် ၀ယ်ပေးတာ။ အဲဒီ အရုပ်ကြီးက ပုတ်လိုက်ရင် "ဂတ်ဂတ် ဂတ်ဂတ်" နဲ့ အော်တာ။ အဲဒီ အသံကို သားသားက လုံးဝမကြိုတ်ဘူး။ တစ်ရက်ကြတော့ မလေးသူငယ်ချင်းနဲ့ သူ့ သမီးလေးက အိမ်ကို လာလည်ပါရော ။ သူငယ်ချင်းသားအမိက ထိုင်ကာရှိသေးတယ် သားပိုင် လေ အရုပ်ထားတဲ့ဗီဒိုကို ဖွင့်ပြီးတော့ ဂတ်ဂတ် အရုပ်ကြီးကို ယူယူဆိုပြီး ပေးတော့တာ။ သူမကြိုက် လို့ လေ။
သားက သူကြိုက် တဲ့ ကစားစရာတွေဆို ပေးမကိုင် ဘူးရယ်။ ပြီးတော့သားက ငယ်ငယ်ထဲက အမြှောက်ကြိုက် တယ်။ အချော့ လည်းကြိုက်တယ်။ အဲဒါ အိမ် အလည်လာတဲ့ မလေး သူငယ်ချင်းက ပိုင်ရေ ဖိနပ်တွေ ပြပါအုံး လို့ပြောတာ ချက်ချင်း ပဲဗီဒိုကို ဖွင့် ရှိသမျှ ဖိနပ်တွေ တခုမကျန် အကုန်ဆွဲထုတ်လာတာ ။ အင်္ကျိတွေ လည်း ဆွဲထုတ် လာ တာ။ ပြီးရင် တော့ မလေး က သားသားဖွသမျှ တွေကို တခုချင်းဆီကို လိုက်သိမ်းရတော့ တာ ပေါ့။
သားသား မကြိုက်တဲ့ ဂတ်ဂတ်
မလေး ရဲ့သားက ငယ်ငယ်ထဲက အရုပ်ဆိုင် တွေခေါ်သွားရင် လည်း တစ်ခု ပဲယူတာ ။ မလေး တို့ က သားနောက် တခု ယူအုံးလေ ဆိုလည်း မယူဘူးရယ်။ ဘယ် ဆိုင် ရောက်ရောက် တခုတော့ ၀ယ် ပေးရတာ။ မလေး သားကငယ်ငယ် ထဲက ညဖက် အိပ်ရင် လည်း တည လုံးတောက်လျောက် အိပ်တာ။ (တချို့ကလေးတွေက နေ့နဲ့ ညနဲ့မှားတတ် တယ် တဲ့ ) မလေး သားက အဲလို မဖြစ်တော့ တော်သေးတယ်။ ညဆို အိပ်ရေးမပျက် တော့ဘူး။ မလေးသားက လေဆန်နာ လည်းမဖြစ်ဘူး။ ကလေး လေနာ တယ် ဆိုတာ နို့တိုက် ပြီးရင် ကလေးကို လေမထုတ်ပေး လို့ ဖြစ်တာ ထင်တယ်။(မလေး အထင်နော်) ။ နို့ တိုက်ပြီးတိုင်း ကလေးကို လေထုပ်ပေးရ တယ် (ကလေးရဲ့ ကျောလေးကို အသာလေး ပုတ်ပေးရတယ် )
Posted by Unknown at 01:542comments:
ဘုတ်ဘုတ် လေး၏ ရာဇ၀င်
မလေး တစ်ယောက် အလှအပ ဘယ် လောက်ကြိုက် လဲဆို သားသားတောင် ဘုတ်ဘုတ်ကို သိနေတယ် ။ ဒါလေးကတော့ မလေးနဲ့ သားရဲ့ရီစရာ အမှတ်တရလေး ပါ။ အဖြစ်အပျက် ကဒီလိုပါ ။ မလေးက တစ်နေ့ တစ်နေ့ကို ဘယ် လောက်တောင် မိတ်ကပ် လိမ်းသလဲဆို သားတော်မောင်တောင် ဘုတ်ဘုတ် ဘုတ်ဘုတ်နဲ့ဖြစ် ရော ။ မေမေ ကလည်း အလှကြိုက် ။ မိတ်ကပ် ဗူးထဲ ပါတဲ့ puff လေးတွေကို အများကြီး ၀ယ် ပေးထားရတာ။ ညဖက် အိပ်ရင် တောင်မှ သားတော် မောင် ကရောင်တာ (မေမေဘုတ်ဘုတ်တဲ့) ။ အဲဒါဆိုတော့ မလေးကလည်း ခေါင်းအုံးထဲ ကို puff လေးထားအိပ်ရတာ ။ ယောင်တဲ့နေ့ ဆို သူ့ လက်ထဲကို puff လေးချက်ချင်း ထည့် ပေးမှ မဟုတ်ရင် ငိုပါရော။ ကလေးများ သူစွဲမိ စွဲရာ ရယ် ။ သားပိုင် ကိုင် တာမြင် တော့ သားထက် ကြီး တဲ့ အိမ်နီးချင်း ကလေးလေး ၂ယောက် ကလည်း 'ဘုတ်ဘုတ် ဘုတ်ဘုတ်' ကို ဖြစ်ရော ပေါ့။ မလေးအထင် ကလေးတွေ ရဲ. သဘော က တစ် ယောက် ကိုင်တာ မြင်ရင် လိုက် ကိုင် ချင်ကြ တာ။
သားပိုင် ၏ ဘုတ်ဘုတ်များ
ကစားပြီ ဆိုရင် လည်း သူ့ ထက် အကြီးတွေ ကစားတာမှ လိုက် ကစားချင်တာ။ ယောကျာင်္းလေး ဆိုတော့ လည်း ယောကျာင်္း လေး ကစားနည်းလေး တွေမှ ဆော့ချင်တာ။ သားပိုင် တို့ များ ငယ်ငယ် ထဲက ဂေါတ်ရိုက်တာမှ ဆော့ချင်တာ။ ပလတ်စတစ် ဂေါတ်တံ လေး တွေဝယ် ပေးထား ရတာ။ သားပိုင် ဖေကတော့ သားကြီးရင် အတူတူဂေါတ်ရိုက် လို့ရပြီ ဆိုပြီးပျော်နေလေ ရဲ့။မိန်းကလေး ဆော့တဲ့ အရုပ်တွေများ ပေးလိုက်ရင် ခြေထောက်နဲ့ ကန်ပစ်တာ။ တစ်ခါက ဘုရားပွဲဈေးရှိလို့ လိုက်ပို့ တာ။ အရုပ်တွေ အစုံ လက်ညှိုးထိုး ပြီး ဝယ်ခိုင်းတာ။ ကိုယ်က ဒါလေး လှတယ် ယူ ဆို မယူဘူး ။ သူလိုချင်တာကို ခါးထောက်ပြီး သေချာရွေးတော့ ဆိုင်ရှင်ကတောင် တခြားကလေးတွေ နဲ့ တူဘူးနော်။ သူကြိုက်တာမှ ယူတာတဲ့ ။ အဲဒါ အပြန်ကျ မလေး မိတ်ဆွေ သမီးလေး အတွက် ချိန်ခွင်လေးတွေ ဂျိုးရုပ် ကလေးတွေ ဒန်အိုးလေးတွေ အစုံ ပေးဖို့ဆိုင်သွားဝယ်တော့ လုံးဝမှကို မတောင်းဘူး။ အဲဒါ မလေးက သား ဒါလေးတွေ ယူမလား ဆို တော့ ခေါင်း သွက် သွက် ခါ ငြင်းပြီး ယူဘူး ယူဘူး တဲ့လေ။ ယောကျာင်္းလေး နဲ့မိန်းကလေး ကလေး ဘ၀ ထဲက အကြိုက် မတူကြ ဘူး။
ဒါတွေမှ ကြိုက် တာ
တောင်လှေ ခါးမြို. မှ ကတိုက်ကရိုက် ပြန် ခဲ.ရ
မလေးတို.မိသားစု တောင် လှေ ခါး မြို. (ပြင်ဦးလွင် ) ကို အလည် တခေါက် သွား ခဲ.မိပါတယ် ချက်ချင်း ပြန်ပြေး ခဲ.ရ တယ်။ သားတော်မောင် ပိုင်လေ အိမ်ပြန်မယ် အိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီး အတင်းငို လို. ဘယ်မှ တောင် မသွားခဲ.ရ ဘူး။ ချက်ချင်း ပြန်ခဲ.ရတော.တယ်.။ သားပိုင်က အဲဒီအချိန်က (၁ နှစ် ၂လ ပဲရှိသေးတာ) စကားက လည်း ' ဖေ ၊ မေ' လို. ခေါ်တာက လွဲရင် ဘာမှ မပြောတတ်သေး ဘူး ။.
တူတော် မောင် နှစ် ယောက် ကလည်း သူတို. ညီလေး ပိုင် ကို ချစ် လိုက် ကြတာ. . ညီလေး ပြန်နဲ.နော် ကိုကိုကြီးတို. နဲ.ဆော. ရအောင် နော် တဲ.။ မလေး ပြော ဖို. မေ.နေတာ မန်းလေး မှ တညအိပ်ပြီးမှ နောက်နေ. မနက် စောစော ပြင်ဦး လွင် ကိုတက် ၈နာ ရီလောက် ပြင် ဦး လွင် ကို ရောက်တယ် ။.ရောက် ရောက် ချင်းတော. တူတော်မောင် တွေ နဲ. ဆော.ပေါ. ညနေ ရောက် တော. အိမ် ပြန်မယ် အိမ်ပြန်မယ် ဆို ပြီး အတင်းငိုတော. တာ။ ဦးလေး တွေ အဒေါ် တွေက လည်း (ပိုင်က စကား မပြော တတ်သေး ဘူးသာဆို တယ် အိမ်ပြန် မယ် ပြောတာ ပီလိုက် တာတဲ. ) ။အဲဒါနဲ. မလေး တို.ကလည်း သားကို အံ.သြ နေ တာ ။ အိမ်မှာ တုန်း ကဖေ မေ လောက် ပဲ ပြော တတ်သေးတာ ဒီ ရောက်မှ အဲ့လို ပြောတတ်တာ။ အဒေါ် တွေ အစ်မတ၀မ်း ကွဲတွေနဲ. ကလည်း မတွေ. ဖြစ်တာတော် တော် ကြာပြီ လေ။ ပြင်ဦး လွင်မှာ ၅ရက် လောက် တော. နေမ.ယ် စိတ်ကူး ထားတာ ။ တစ်ညတောင် မအိပ် ခဲ.ရဘူး ။ ပြန်တောလည်း တူတော် မောင် နှစ် ယောက် က ညီလေး တို. နဲ. လိုက် ချင် တာဆို ပြီး ငို ကျန်ရစ် ခဲ.တယ်.. . ။အဲဒါ တစ်လမ်းလုံး ကားပေါ်မှာလည်း အိမ်ပြန်မယ် အိမ်ပြန်မယ် နဲ့ ငိုပြီးလိုက်လာတာ။ နောက်ဆုံး မောသွားတော့မှ အိပ်ရော။ နောက်နေ. မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာကနိုးတော့ သူ. ဘဘ က ပိုင် အိမ်ပြန် မယ် ပြောအုံး လေ ဆိုတော. ပြောဘူး ပြောဘူး တဲ. ... ဘယ်လိုမှကို ပြောခိုင်းလို့ မရတော့ဘူး။
ကလေးများနော် မနေ. ကသူ မဟုတ်တဲ. အတိုင်း ပဲ ။
ကိုယ်တိုင် သီကုံး အလှ ဆုံး
မလေး က စာဖတ်ခြင်း စာရေးခြင်း ကို အင်မတန် နှစ်သက် ပါတယ် ။ ဒီကဗျာ လေးက ရင်မှာ ဖြစ် တည် တာ ကို ချရေး ဖြစ်တာပါ ။ ကာရံ တို. နဘေ တို. ညီချင် မှ ညီမှာ ပါ ။ ကာရံ နဘေ အကြောင်း လည်း မလေးနား မလည် ပါဘူး ။ ဒီတိုင်း ပဲ ချက်ချင်းရေး ချင်စိတ် ပေါက်လာ လို.ချရေးဖြစ် လိုက်တာပါ ။
ခေါင်းစဉ် လေးက အလှဆုံး......
ချစ်ခြင်း ကို အခြေခံ
နှလုံး သားကို ရင်းတည်
သံယော ဇဉ် ဖြင်.ဖွဲ. နှောင်
နားလည် မှု ဖြင်. တည် ဆောက်
တသက် မခွဲ ထာဝရ လက်တွဲ
ခိုင်ကြည် မြဲ တဲ. ဒို. နှစ် ယောက်.....
စေ.စပ် သေချာသော ယောကျာင်္း လေးများ
ဒီ နေ. ရေးဖြစ် တဲ. အကြောင်း ကတော. မှတ်မှတ် ရရ လို. ပဲ ပြောရမှာပါ.။ ဒီလို ပါ မလေး သားသား ကို မွေး တော. သူငယ် ချင်း တွေ လာ မေးကြ တယ်။ အပျိုကြီး တွေ ရော သားသားမီး မီး မေမေ တွေ ရော လူစုံ ပါ တယ် . ..အဲဒီ ထဲမှာ မှ မှတ်မှတ် ရရ မောင် ငယ် လေး ရဲ. သူငယ် ချင်း အုပ်စု (စုစုပေါင်း ၁၂ ယောက်) ကတော. အမြဲ တမ်း ကို အမှတ် ရ နေတော. မှာ ..ကလေး မွေး တယ် ဆို တော. သူငယ် ချင်း တွေက ကလေး ပစ္စည်း အစုံ နဲ. လာမေးကြ တာပေါ.။ အားလုံး ကတော. ပေါင်ဒါ ဗူး အကျီင်္ အဒါတွေပဲ ၀ယ် လာ ကြတာ များတာပေါ. နော်. ..ပြောရရင် မလေးတောင် သားကိုမွေးတုန်းက( ပေါင်ဒါ အကျီင်္ ပေါင်းနှီး ခြေအိပ် လက်အိပ် ကလေးတွေ ခေါင်းအုံး သေးသေး ဖက် လုံး သေးသေးလေးတွေ) အဒါတွေ ပဲ ၀ယ် ဖြစ် တာ တခြား လို. အပ်တာတွေ ကို အဲ ဒီ အချိန် မှာ မစဉ်း သားမိဘူး။ ဟို ကို လူပျို (၁၂) ယောက် နဲ. တွေ. မှ ပဲ မလေးတစ် ယောက် ကျွတ် တော.တယ်။ ၀ယ် လာလိုက် တာစုံ လို. ကလေး တယောက် အတွက် ဘာမှ လိုတာမရှိ အောင် ကို ပြည်.စုံ တာ သူတို. ကပြော သေးတယ် အမက လည်းး တဲ. ကျွန် တော် တို. လောက် တောင် မသိဘူး တဲ.။ မလေးက လည်း ၀န်ခံ လိုက်ပါတယ် ...ဟူတ်တယ် မလေး သူတို. လိုကို စေ.စေ. စပ်စပ် မသိဘူး.။၀ယ် လာလိုက်တာတွေက အင်္ကျိ ဘောင်းဘီ ၀မ်းဆက် ကလေး တွေ ၁၂စုံ ၊ လက်အိပ် ခြေအိပ် ၁၂စုံ ၊ဟော သရေခံ ၁၂ခု၊ စောင် ပါးပါးလေး တထည်၊ ရေချိုးပြီး ရင် သုပ်ဖို.တဲ. မျက် နှာသုပ် ပ၀ါလေး ကတစ် ထည်၊တစ် သျူးအစိုက ၁ဒါဇင် ၊ ကလေးရေချိုး ဖို.တဲ. ပလတ်စတစ် ကန် အသေးလေး တစ် ခု ၊ချိုလိမ် လေးတောင် ပါလိုက် သေး ခေါင်းအုံး ဖက် လုံးတစ်စုံ ၊ ဦးထုပ် သေးသေးလေး ၆ လုံး၊ diapers အထုတ်ကြီး ၁ထုပ် ၊ baby johnson (ပစ္စည်းအစုံ ပါ) ပါကင် ၁ဗူးဝယ် ခဲ. ကြတာလေ.. ။.မလေး မှာ လေ သူတို. ၁၂ ယောက် ကို ကျေးဇူးတွေကို တင် လို....
မလေး တယောက် ဘုနှင်. ဘောက်
မလေး လေ ပြောပြ ရအုံးမယ် ။ မိဘတွေ တိုင်းက ကိုယ်.ရဲ. သားသမီး တွေပေါ် စိတ်ရှည်တာ ချစ်တာ ဟာ ဘယ်အရာ နဲ. မှ နှိုင်းယှဉ် ဘို.မရဘူးဆိုတာ မလေးတယောက် ကောင်းကောင်းကြီး နားလည် လာခဲ့တယ်။ ဘာလို. လဲ ဆိုတော. မလေးကိုယ် တိုင် လည်းမိခင် တစ်ယောက် ဖြစ်နေလို. ပါ ။ဖြစ်ပုံ ကဒီလို သားပိုင် ၈လအရွယ် တုန်းက မျက်စိ နာဖြစ်တာ .မျက်စိဆရာဝန် ဆီ ပြေးရတော.တာပေါ့ ။ ဆရာဝန်ဆီသာ သွားရတာ (ကလေးက အရမ်းငယ်သေးတော.) ဆရာဝန် ထည်.ခိုင်းတဲ. ဆေးလည်း မလေးတို. ကမျက်စိထဲ ကို မထည်.ချင်..ဆရာ ၀န်ကတော. ဘာမှ မဖြစ် ဘူး မစိုးရိမ် ရဘူး ပြောပါတယ် ။ ကိုယ်.သားဆိုတော. လည်းစိုး ရိမ် တာပေါ. ဘာလုပ် လို.ဘာကိုင် ရမှန်းကို မသိဘူး ။ သားပိုင်က သိပ်မသက်သာတော့ သားကိုကြည့် ပြီး စိတ်လည်း မကောင်း ဘူး။ အဲတော့ ဘာ ဖြစ် ကြ လည်းဆိုတော့ သားပိုင် ဖေနဲ. တစ်ယောက် တစ်ခွန်း အော် ကြတော.တာပေါ. (တကယ် တမ်း
ကတော. မအော် သင့်ဘူးပေါ.နော် ) တခုခု ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ကို ခေါင်း အေးအေးထားပြီး သားကို မျက်စိနာ သက် သာအောင် ဘယ် လို လုပ်ရ မလဲ ဖြစ် သင်.တာပေါ။ ဒီလို. နဲ. ညနေ လောက် ရောက်တော. သားပိုင် ဖွားဖွားက ဖုံးဆက် ပြောပါလေ ရော ။ ဘာမျက် စဉ်းဆေးမှ ထည့်စရာ မလို ဘူး ။ မိခင် နို့ ရည် ကိုသာ မျက်လုံးလေး ထဲ ကွင်းပေးလိုက် မကြာဘူးပျောက်သွား လိမ့်မယ်တဲ့။ မလေးလည်း ချက် ချင်းပဲ သားပိုင် မျက်ဝန်း လေးထဲ ထည့် ၊ အပြင်ကနေလည်း ကွင်းပေးလိုက်တာ ။ တကယ် မကြာဘူးရယ် ညလည်းရောက် ရော သားပိုင် မျက်လုံးကလေး လုံးဝကို ယူပစ် သလို ပျောက် သွားတာ။ သားပိုင် သက်သာမှပဲ မလေး တို့နှစ်ယောက် ပြုံးနိုင် ကြတော့တာ..............
တခါ တလေ ဖြစ်တတ် သည်။
ဒီနေ.တော. မလေးတယောက် သားပိုင် ရဲ. ဂျီ ကြတဲ. အကြောင်း ရေးပါမည်။ သားပိုင်က အမြဲတမ်း ဂျီကြတာ တော.
မဟုတ်ဘူး သားပိုင် ဂျီကြတာက တမျိုး။ နည်းနည်းတော. ကြာပါ ပြီ မလေးတို.က အမျိုးတစ် ယောက် အိမ် ကို သွား
ကန်တော. ကြတာ အဲဒီ အိမ် ကိုလည်း ရောက် ရော အဲဒီ အိမ် ကို မ၀င်ရပါ ဘူး ဆိုပြီး အတင်း ငိုပါရော အဲဒါနဲ. မလေး တို. လည်း ဒရောသောပါး ကန်တော. ပြီး ပြန်ပြေး ခဲ.ရရော။ သားပိုင်က ငယ် ငယ် ကတည်းက သူမသွား ချင်တဲ.နေရာဆို ဘယ် လိုမှကို မလိုက်ဘူး ။ သူသွား ချင်တဲ. နေရာများဆို မလေးတို.ကို လက်ဆွဲ ပြီး လိုက်ပို. ခိုင်းတော.တာ. ။ ဂျီမကြ ရင် play ground လိုက်ပို. မှာ ဆိုတော.မှ ချက်ချင်း ရီတော.တာ. မိဘဆိုတော. သားသမီး ပျော်တာမြင် ရင် ရင်ထဲမှာ သူအလို လို အပျော်တွေ စီးဆင်းသွားတာ. ................
သားပိုင် ၏ တနေ.တာ
မလေးတယောက် သားပိုင်အကြောင်း များရေးရမယ် ဆိုရင် ပျော်ကိုနေတာ။ ဒီနေ.ကတော. သားပိုင်ရဲ.
တနေ.တာ လေးပါ။ သားပိုင်ကလေ မနက်မိုးလင်း လို.. နိုးပြီဆိုတာနဲ. ည၀တ်အကျီင်္ ကို လဲခိုင်းတော.တာ။ သားပိုင်ကသိပ် အသန်.ကြိုက်တာ။ အသစ်ကလေး များဝတ်ပေး လိုက်ရင် ပျော်တပြုံးပြုံးရယ်။အဲဒါ အ၀တ်လဲပြီးရင် လမ်းတပတ် လျှောက်ပေးရတာ (သြော်ပြောရအုံးမယ် သားပိုင်ကလေ လမ်းလျှောက်ရင် လက်ကလေး နှစ်ဖက် နောက်ပစ် ပြီးလျှောက် တာ ) သိပ်ချစ်စရာကောင်းတာ။ မိဘဆိုတော.လည်းသားကို ကြည်.ပြီး ကြည်နူးနေတာ။ မလေး တို.ကသားပိုင်ကို ငယ်ငယ် ကတည်း က မနက်မိုး လင်းရင်ထမင်းနဲ. နွားနို.တခွက် ကျွေးတာ။ အခု နည်းနည်းကြိးလာတော. လူကြီးတွေ စားတာမှ စားချင်တော.တာအခုဆိုရင် မုန်.ဟင်းခါးတို. ခေါက်ဆွဲတို. ကြိုက်တတ်လာပြီ။ ဟောသားကိုင်ကလေ စားပြီးပြီဆိုရင် တံမြက်စည်း ကိုင်ပြီး လှဲတော.တာရယ်။ လှဲပြီးရင် တော.ဆော. လေ သတည်းပေါ.။
နေ.လယ် ဆိုရေချိုးပြီး ရင် ၂နာရီ ၃နာရီလောက်ကို အိပ်တာ (မအိပ်သေးခင်တော. သိပ်သိပ်ဆော.)နောက်မှ သားပိုင် ဘယ် လောက်အဆော. မက်တယ်ဆိုတာ ရေးအုံးမယ်။
မလေးတယောက် မအားတာနဲ. မရေး ဖြစ်တာတော် တော်ကြာပြီ။ မလေး သားလေးက အခုဆို ရင် စကားတွေ
တောင် တော် တော်ပြောတတ် နေပြီ။ မလေးသားကလေ စကားစပြော တာက မေတဲ. မလေးဖြင်. သားပိုင်
မေလို. ခေါ်တဲ. အသံကြားတော. ရင်ထဲမှာ အရမ်းပဲ ၀မ်းသာမိတယ် ။ ရက် နည်းနည်း ကြာတော. ဖေလို.
ခေါ်တတ်လာတယ် .သားပိုင်ဖေ ဆိုတာ ၀မ်းသာလွန်းလို. ထကိုခုန်ရှာတာ။ မိဘ တိုင်းအတွက် သားသမိး
ဆိုတာ အေးမြတဲ. ရေကြည် တပေါက်ပဲ။
အခုဆိုရင် သားပိုင်က ချေးများ တတ်လာပြီ။ သူမကြိုက်တာများ ကျွေးမိရင် (ထွီထွီ) ဆိုပြီး ထွေး ပစ်တာရယ်
သြော် ပြောရအုံးမယ် မလေးသားက လေ လက်ဖက်သိပ်ကြိုက်တာ။ (မလေးက သားကိုယ်ဝန် ရှိတည်းက
လက်ဖက်စား ခဲ.လို.ထင်တယ်သားကြီး လို.လက်ဖက်စ စားတော.လည်း ဗိုက်အောင်. လေနာ ဘာမှ မဖြစ်ရှာဘူး)
Chit taeakyuang(ချစ်တဲ့အကြောင်း)
မလေး တယောက် လက်နာနေ လို. စာမရေးဖြစ်ဘူး ရယ်။ ဒီနေ.တော. လက်က သက်သာလို. ရေးအုံးမယ်။
ဒီနေ. မိုးလေးကအေး အေးနဲ. မန်းလေး မုန်းတီသုပ် စားဖြစ်ကြ တယ်လေ။ သင်္ကြန်ရောက်တော.
မြန်မာပြည် ကို လွမ်းမိပြန်ရော ..
မိခင်တယောက်ရဲ.ချစ် ချင်း မေတ္တာ နဲ. သားလေး ပိုင် ကို သိပ်ချစ် ရပါတယ်။ သားလေး လမ်း စ လျောက်တတ်တုန်း က မလေးလေ ၀မ်းသာ လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ ကြွားရအုံးမယ် မလေးသားက လူချစ် လူခင်ပေါတယ်။ သားကို မြင်တဲ. လူတိုင်းက ကလေးလေးက ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာတဲ. မိခင်ဆိုတော..၀မ်းသာတာပေါ. ။ မလေးသားက လေ လမ်းလျောက်တာ အရမ်းမြန်တာ သူနောက်ကို အမြန်လိုက်ရတာ။ လမ်းလျောက်တတ်တော. အပြင် ကိုအရမ်းထွက်ချင်တာ (လျောက်လည်ချင် တော.တာလေ)။ သားက သူလိုချင်တာလေးများ ရှိရင် အမေ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ပြုံးပြုံးပြီး အတင်းနမ်းတော့တာ။ အဲဒါဆို ကိုယ်က အလိုက်သိရတော့တာရယ်။ အရုပ်ဆိုင်နား ရောက်ရင် သား အရုပ်လိုချင်လို့ လား ၊ မုန့် ဆိုင်နား ရောက်ရင် သား မုန့် လိုချင်လို့ လား မေးရင် ခေါင်းကြီး အတင်း ငြိမ့်တော့တာရယ်။ နောက်တစ်ခုက သူများက မုန့် ပေးလို့ ကတော့ မအေ မျက်နှာကို အရင်ကြည့်တာ။ မလေးက ခေါင်းရမ်းပြလို့ ကတော့ လုံးလုံးကို မယူတာရယ်။ သားယူရတယ်လေ ဆိုမှသာ ယူတာရယ်။ ပြီးတော့ သားက ငယ်ငယ်ထဲက သူလိုချင်တာကို ရွေးတက်နေပြီ။ အဝတ်အစားက အစပေါ့။ ရေချိုးပြီးပြီဆို ဗီဒိုကို ဖွင့်ပြီး စိတ်ကြိုက် ဝတ်စုံကို လက်ညှိုးထိုး ပြီး ဝတ်ခိုင်းတာလေ။ အရုပ်ဆိုရင်လည်း အရုပ်ဗီဒိုရှေ့ သေချာ ရပ်ကြည့်ပြီးမှ သားကိုင်ချင်တဲ့ ဟာကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ယူခိုင်းတာ။ သား တစ်နှစ်ပြည့်တော့ သွားက အပေါ် လေးချောင်း ၊ အောက် လေးချောင်း စုစုပေါင်း ၈ ချောင်းပဲ ပေါက်သေးတယ်။ တခြားကလေးတွေထက် သွားပေါက်နှေးသလိုပဲ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်က ကြက်ကြော်တွေဆို မာ မှာဆိုလို့ ချေပြီး ကြွေးရင် မကြိုက်ချင်ဘူး။ သားက ငါး နဲ့ ကြက်ဥ ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ ။ ကြက်သားဆို တစ်ခါတစ်လေ အကုန်ထွေးပစ်တာရယ်။ ဖုန်းလာရင်လည်း ရှေ့ဆုံးက အတင်းပြေးကိုင်ချင်တာရယ်။ ဟမ်းဖုန်းကိုဆို အလစ်မပေးရဲဘူး ။ လစ်တာနဲ့ ဖွင့်ပြီး အကုန်လျှောက်နှိပ်တော့တာ။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ဝင်သွားလို့ အမြန် ချရတာလဲ ရှိသလို ၊ တစ်ချို့ ကျ ပြန်ခေါ်လို့ ကလေးမှား နှိပ်တာပါဆိုပြီး တောင်းပန်ရတာလဲ ရှိပြန်ရော။ ပြီးတော့လေ သားက သူ့ ဦးလေး စတိုင်မျိုး ဖုန်းများပြောရင် ပေါင်ကြားထဲ လက်က ထား ၊ လမ်းလျှောက်ရင်း ခေါင်းလေး တစ်ငြိမ့်ငြိမ့် နဲ့ဟရို ၊ ဟရို နဲ့ ဟစ်ဟော့ စတိုင်မျိုး ကလည်း လုပ်တက်သေးတာ။
ဒါလေးက သား ၈ လပြည့်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေ။
ဖိနပ်မပါတဲ့ သားရဲ့ ဟစ်ဟော့စတိုင်လ် (တစ်နှစ်နဲ့ နှစ်လ အရွယ်ပေါ့)
မလေးတယောက်အလုပ်မအားတာနဲ. မရေးဖြစ် ဘူး။ဒီနေ.တော. နည်းနည်းရေးအုံးမယ်။ မလေးသားကို
၆ လ ပြည်.တော.ထမင်းစ ကျွေးတာ ပထမဆုံးစ ခွံတဲ.နေ. က သားသားက လူကြီး တယောက်စာ လောက်
ကို စားတာ။ နောက်နေ.တွေတော. နဲနဲချင်း ပဲကျွေး တော.တယ်။ မလေး မေမေက ပြောတယ် ကလေးကို
ထမင်း ခွံရင် နဲနဲလေး ကနေစခွံ ရင်း အစာအိမ်ကို အကျင်.လုပ်ပေးရတယ်တဲ. ။ မလေးတို.က မသိတော.
အများကြီး ကျွေးတာ။ မလေးသားပိုင်က ၆လ ပြည်.တော. ထိုင်ပြီး ဆော.တတ်နေပြီ။ ဆော.လိုက်တာ မှ
အရမ်း ပဲ။ သားပိုင်အနားမှာ တယောက်က အမြဲတမ်း ကြည်.နေရတာ။ ဒီလိုနဲ. ပဲ ကြည်.နေ ရင်းကနေ
သားက လမ်း စ လျောက်ချင်ပြီ။ (ပြောရအုံးမယ် မလေး သားက လေးဖက်မသွားဘူး )
ဒီနေ.မလေးရဲ.သား(ချစ်သောပိုင်)အကြောင်းရေးမယ်နော်။ သားလေးက အခု တစ်နှစ်နဲ့ ၅ လ ရှိပြီလေ။ ဒါပေမယ့် မွေးခါစက အရွယ်ကနေ စပြီး အခုအရွယ် ထိကို သားအတွက် အမှတ်တရ အနေနဲ့ ရေးအုန်းမယ် ။
မလေးသားလေး တစ်လ ပြည့်တုန်းကပေါ့ သားလေး.နဖူးမှာ အနီစက်လေးတွေ ပေါက်တာကိုမလေးတို.ကရိုးရိုး အပူဖုပေါက်တယ်ထင်တာ တရက်နဲ့ လည်းမပျောက် နှစ်ရက်လည်းမေ ပျာက် ဆေးခန်းပြမှ ပဲ ဗိုင်းရပ်ဝင်တာတဲ့ မလေးတို.အားလုံးစိတ်တွေကို တအားပူသွားကြတာ (သားဦးဆိုတော.) အဲဒီနေ.ကစပြီးသားကိုချီတော.မယ်ဆိုရင် dettol နဲ.လက်ကို သေသေချာချာဆေးပြီးမှ သားကိုချီကြတော.တာ ။ ဆရာဝန်ပြောတာက ကလေးကိုကိုင်တဲ.လက်က သန်.ရှင်းနေဖို.လိုတယ်တဲ. ။အဲဒီနေ.ကတည်းက ဒီနေ.ထိသားကိုချီတိုင်း လက်ကိုဆေးပြီး မှချီတော.တယ်။ ကလေးငယ်ရှိသော သူငယ်ချင်းများအားလုံး မိမိရဲ. ရင်သွေးလေးများကို ချီတိုင်း လက်ဆေးကြပါလို. တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပြီနော်။
မလေးရဲ့ ဝါသနာနဲ့ သားလေး အကြောင်း အမှတ်တရ ရေးချင်လို့ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို စတင်ဖြစ်တာပါ။
အလွန်ဆော.တဲ.ပိုင် မလေးတယောက်အလုပ်မအားတာနဲ. မရေးဖြ...